INkomfa yeziSeko zoPhuhliso ka-2014: Ukuphefumlelwa kwe-Hispanics -Geofumadas
NgoNovemba, 2014 Microstation-Bentley, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Kwiveki eledlule INgqungquthela Yengqalasizinda yabanjelwa kunyaka we-2014, kwakhona eLondon, apho ibhaso elibizwa ngokuba yi-Inspired ibanjwe.
Umnyhadala wawucwangciswe ngakumbi kunamanye amaxesha, usetyenziso lweselfowuni abayileleyo lwe-iOS kunye ne-Android yayiyeyona ibalaseleyo; ngohlaziyo, i-ajenda, iifoto kunye neengcebiso malunga nexesha lokuphola elingabikho kwaphela. Bahlala behambisa amaphepha akudala, kodwa eyona nto ibimnandi kukufumaneka kweenguqulelo zedijithali zento umntu ngamnye afuna ukuzisa yona, kwaye ayisahambelani neesutikheyisi zangasemva, ngelixa kusenziwa iapp ukuba imamele isandi esithi "Live to Tell It" endaweni yokubukela imovie engenanto okanye uxinzelelo kwimephu yokuhamba kwezi ndlela zokuhamba elwandle.
Ngaphezu kokuba besele sazi ...
Phakathi kwezinto ezintsha ezifunyenweyo, kuphela zii-SITEOPS ezithatha ingqalelo yam, isicelo esimangalisayo esizenzela uyilo lomhlaba kwiinkalo ezinje ngeendawo zokupaka okanye indawo yokuhlala, ukuphinda kufundwe kubhabho xa umda, i-axis, indawo yokungena okanye iiparameter zesayizi yokupaka zishenxisiwe kwaye izibalo ezizenzekelayo zokusika / zokugcwalisa. Ndayibona eCharlotte kwiminyaka emi-6 eyadlulayo kwaye ndandinomdla, kwaye ngelixa yayisebenza kwi-AutoDesk Civil3D, kubonakala ngathi uBentley wayithanda kakhulu kangangokuba kwiminyaka embalwa siza kuyibona njengenqaku leGeopak.
Sikuthandile ukubonakaliswa kwezicwangciso ezisebenzayo ezisetyenzisiweyo kulo nyaka ka-2014, nangona ndicinga ukuba zivela ngaphambili. Ukugcina umlingo, ndikhetha ukuwabhala ngolwimi lwabo lwantlandlolo:
I-BIM epheleleyo (iincwadi zokufunda)
Umongo we Geo-context
Ukukhulula Ukubonakala (nge-models)
Ngasinye wayisa ingcaciso 5 iimakhishithi, kuba leyo iye kuzisola 13 moya iiyure emele idilesi ukuya kumakhondo omsebenzi Tegucigalpa siwe ngokukhawuleza eLondon kunye iyure enye nje ukususa ukoyika ngamanzi Ebola xa bebonga mmelwane
Kwinqanaba leentetho, intlonipho yethu kubungakanani bababonisi, ekungekho xesha lokwenza amanqaku ukuze singalahlekelwa ngumzuzu wokhuthazo. Njengoko benditshilo ngolunye usuku, awuzukufunda ezi ndawo, kodwa uyazi ukuba zihamba phi iindlela.
Ukusuka kumazwi ka-Ed Merrow, kwintetho yakhe kwiProjekti yeeProjekthi zeNkunzi:
Iprojekthi enkulu ayihlali kubanjineli, kodwa umntu oshishino ...
Ulawulo lweprojekthi bubungcali bokulungelelanisa ...
Iprojekti yobunjineli ngumsebenzi wokuvavanya ukuze sikwazi ukulawula ulwazi ...
Le nxalenye ikhumbuze ngomnye wabafundisi bam abambalwa, ababa ngumthwalo wokuba ixesha leklasi lihlala lincinci. Emva koko nda khumbula umfundisi omhle ondikhonze umxholo othi "ukuthengiswa kweeprojekthi zentlalo" kunye nokudibanisa nomcebisi wangoku osithathile kwizicwangciso zethu ze-UML kunye nokushukunyiswa kwe-lice esitshilo kuthi:
Yeka ukuthetha ngokuzinza. Iphi inzuzo kule nkqubo?
BIM: indlela eya kuyo wonke umntu.
Igama elivakala kakhulu namhlanje yi-BIM. Iminyaka emi-3 eyadlulayo yayingu-i-modeli, efanayo, kodwa kumgangatho kunye nelizwi elamkelweyo ngumntu wonke.
Asizukunyanzela nabani na nge-BIM. Kodwa kuphela kwendlela.
Kule nkalo, iinkampani ezinkulu zimiselwe ukuba amazwe avume umthetho ukuze i-BIM yamkelwe njengomgangatho wokulawulwa kweziseko zophuhliso. Apha phantse yonke into iyangena, njengoko sithetha ngezakhiwo, iindlela, izityalo zeshishini, iinkqubo zothumelo, iinkqubo zendlela kunye nayo yonke into ebandakanyekayo kumjikelo wabo: Ubume bendawo, uyilo, ulwakhiwo, ukumodela, ukusebenza, ukugcinwa kunye nokutshintshwa.
Kuyathakazelisa ukubekwa phambili komjikelo wezemigodi, apho izisombululo ezinje ngeMineCycle Designer, iMineCycle Survey kunye neMineCycle Material Handling ziyakhuthazwa, apho amandla e-Bentley Map, AECOsim, OpenPlant kunye ne-OpenRoads ebezingaphezulu kugxilwe kuqeqesho oluqhelekileyo. Ewe, besele siyibonile isiza emva kokuba iinkampani ezingama-500 zaBanini abaPhezulu bevele kwiimarike ezomeleleyo zikukuxhaphaza izibonelelo zendalo, kubandakanya nezemigodi.
Isicwangciso sokungayi kuma-greats kodwa kwi-gigantic sisebenzele iBentley, xa besithi i-20 ye-25 (80%), i-40 ye-50 (80%), i-69 ye-100 (69%) kunye ne-233 ye I-500 (46%) isebenzise ubuncinci iProjekthiWise okanye iAssetWise ukulawula ukusebenza kwezixhobo. Kwanele ukuzola, nangona indlela abanethemba lokufikelela kuyo kubasebenzisi abaphakathi okanye ngabanye ngeendlela ezintsha ukusuka kwi-2015 ukuya kwi-2018 ibinomdla.
Ngaba igalelo elibonakalayo ukuba akhademi ziya, kwimeko olukwimo Arhente liye lasungula AssetWise Academy ukukhuthaza uqeqesho lobungcali kwizinto ezifana neendlela, imizila kaloliwe, elezoThutho kunye Mega Amaphulo, ukuphumeza ulawulo yi BIM standard.
Yintoni ephosakeleyo ngeTymble?
Kule nto kucacile ukuba ii-CEO ze-Bentley, Trimble kunye ne-Siemens zinesicwangciso esihle kakhulu se-2018. Umnyhadala weTrimle Dimensions waphuhliswa ngaxeshanye, kwiveki enye eLas Vegas, ke ayizothusa into yokuba iminyaka emibini okanye emithathu ibhengeza ukuba yomibini imisitho iya kuba nye. Siyazi kakuhle ukuba ukudityaniswa koqeqesho (hayi iinkampani) kuya kulandela oko sele sikubonile kwi-HEXAGON, apho uLeica, u-Erdas, u-Integraph kunye nayo yonke into ebeyiqokelele yaba yimodeli enomtsalane eya kuthi ifike ku-Trimble. I-Siemens + iBentley.
Kwicala leTrimble bekukho indlwana, apho imizekelo yokudityaniswa phakathi kweBentley ProjectWise, ifundwe kwizixhobo zeGPS, isikhululo setototi esiqokelela idatha kunye nemodeli yeProjekthiWise isebenzisa i-Model. Ke ndicinga ukuba lo ibingunyaka wokusebenza, apho isibonelelo sizizo zombini ezi meko: I-Bentley ifikelela ebaleni, nazo zonke izakhono zala maqela: khomba amafu, i-COGO, imodeli yento; I-Trimble ineqonga elidibanisa ukuhamba komsebenzi ukusuka kuvavanyo kuyilo, kunye nokukhetha ukuphinda ubambe ngesantya esikhulu.
AbakwaNokia babonisa into abayenzayo, kwisifundo apho kubonakala kum ngathi bebengasebenzi. Ngokudityaniswa kwawo onke amandla e-i-modeli, izicelo ze-Bentley kulawulo lwezityalo zorhwebo, iinkqubo zothumelo zombane, ukuveliswa kombane… ngokuqinisekileyo i-Nokia yeyona izuziweyo. Apha, nangona umsebenzi kufuneka ube nzima, kubonakala kum ukuba i-chemistry ayifani; nkqu nakwinkcazo-ntetho ngesidlo sasemini ngoLwesithathu bekuyimfuneko ukucela abaphulaphuli bathule njengoko benomdla wokuluma abakunika umlenze wenkukhu kunokuba babenombono weprojekthi, benobungqina obuncinci bokubonisa. Ewe, sasineenjineli ezininzi, sineenjineli, kwaye zimbalwa iinjineli zeshishini okanye zombane, ezizezinto eziza kuchaphazela oku.
Kuthiwani nge-Premiss Be Inspired
Ngeli xesha sabelwe iitafile, ngenxa yoko khange sikwazi ukwenza itafile yethu yokubheja kunye noogxa bethu abavela kwamanye amaphephancwadi. Ihlazo kuba ngeli xesha bendiphantse ndaqiniseka ngengqikelelo yam, kwaye ngekhe ndifumane iipawundi ezili-10 entloko ezimelwe zezi nwele zimthubi.
Kwitafile endichukumisileyo sabelane nabantu baseMexico ababini, umDatshi, uMzantsi Afrika kunye nentombazana entle yasePortugal. Siyavuma ukuba inqanaba leeprojekthi kulo nyaka belihle kakhulu.
Kukulungele ukwazi ukuba iLatin America iye yazisa iintlomelo ezintathu ezifanelwe:
Iprojekthi yezimayini ePeru.
I Tunnel phantsi kolwandle lwaseBrazil.
kunye neProjekthi yeePorts yaseUruguay.
Emva kweminyaka eliqela ndibukele lo msitho, kufuneka ndivume ukuba umbono wokuba ukubakhona kuyakhuthaza uzalisekisiwe. Ngeli thuba ndikwazile ukuthetha nesithethi seprojekthi yamazibuko eUruguay, ngaphambi nasemva kokugaya iadrenaline yokuziva ngathi ndiphumelele, ndilinde ithutyana. Xa umela ilizwe lakho phakathi kweeprojekthi ezikumgangatho wehlabathi ezingama-56, kwaye igama lakho likhankanyiwe ngembasa, ngokuqinisekileyo uziva ubuzwe obu singabunandiphiyo kwimidlalo yokuhlungela iNdebe yeHlabathi. Akukho mntu emva komzuzwana onje, uya kufana nangomso olandelayo. Kwaye oku zihlobo zam, nguKhuthazwa!
Ekuqikeleleni kwam kunyaka ozayo umsitho uza kuphinda ube seLondon, kuba aba bakumsi wokufela. Kwaye ke mhlawumbi baya kuyidlala ne China, ukuvala ngo-2017 eLas Vegas ngeTrimble kunye neNokia kwisiganeko esinye iBentley ibiza i-1B18.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Uphefumulelwe i-2014
Post Next Khangela uphinde usetyenzise ukusebenzisa amazwi avamile: i-MicrostationOkulandelayo »